Haren’ny Fiteny Arabo Hoan’ireo Mpikatroky Ny Fampitam-baovaon’ny Fiarahamonina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Febroary 2014 10:37 GMT
Ny SMEX, Social Media Exchange (Fifanakalozana amin'ny Media Sosialy), dia fikambanana ” manatanjona handrisika ny olona sy hanitatra ny fahafaha-manao amin'ny alalan'ny fampiroboroboana ny fampiasana ara-stratejika ny media vaovao ao anatin'ny toe-javatra isan-karazany. Miorina ao Libanona ry zareo ka mifantoka amin'ny fiarahamonina , ny fiteny ary ny kolontsaina arabo ny tontolo iasan'izy ireo.
Tasharuk, dia tetikasa vao haingana hamondronana ny fitaovana hoan'ireo mpikatroka amin'ny fampitam-baovaon'ny fiarahamonina izay azo vakiana amin'ny teny Arabo (sy amin'ny teny anglisy). Ny Tasharuk, midika hoe “miara-miasa” amin'ny teny Arabo, dia mandahatra sy manasokajy ireo harem-pahalalana – misy tompony saingy azo ampiasaina avokoa ny ankamaroany. Hoy izy ireo:
Ny tanjon'ny habaka dia ny hanamora sy hanafaingana hoan'ireo mpampiofana vaovao sy ireo vondrona fampahalalam -baovaon'ny fiarahamonina hanondro votoaty tsara kalitao mifandraika amin'ny media sosialy sy media nomerika ho amin'ny fampatanjahana sy ny fiarovana. Manantena izahay, amin'ny fanaovana izany, tsy hanafaingana ny fandraisana sy ny fanavaozana ny fampiasana ara-stratejika ny media sosialy sy nomerika ihany fa mba hanampy ireo mpampiofana ao an-toerana ihany koa ao amin'ny fiarahamonina misy azy.
Mihevitra ihany koa izahay fa ny Tasharuk dia dingana voalohany mankany amin'ny fampivondronana fiarahamonin'ny fanazarana ho an'ny media mampiofana mpanazatra manerana ny faritra.
Amin'ny herinandro sy volana ambony no hampahafantarinay ao amin'ny Facebook sy Twitter ireo fitaovan'ny Tasharuk.